अमेरिकासँग हात मिलाउने मान्छे – RAJESHares KOIRALAnd
अमेरिकासँग हात मिलाउने मान्छे
July 6, 2013 September 15, 2013
Child Memories of Dr Shankar Prasad Sharma, Nepalese Ambassador to the USA
हामी एक अर्काको साथी भएजस्तै एउटा देश र अर्को देश साथी हुन्छन् । त्यसलाई मित्र राष्ट्र भन्ने गरिन्छ । एक देशले अर्को देशलाई सहयोग गर्छन् । तर साथी बनेका देश कसरी हात मिलाउँदा होलान् ? कसरी गफ गर्दा होलान् ? फोनमा कसरी कुराकानी गर्दा होलान् ?
देशहरू आपसमा कुरा गर्न सक्दैनन् । कुरा गर्न, फोन गर्न, हात मिलाउन मान्छे पठाउँछन् । यसरी एउटा देशले उसको मित्र राष्ट्रमा पठाएको मान्छेलाई ‘राजदूत’ भनिन्छ । कोही अर्को राष्ट्रमा बस्ने गरी राजदूत भएर जान्छन् त कोही प्रतिनिधि मात्र हुन्छन् । प्रतिनिधि कहिलेकाहीं त्यहाँ जान्छन् । नेपालले विश्वका १ सय ३८ देशलाई आफ्नो साथी बनाएको छ । नेपालका केही मित्र देशमा नेपालका राजदूत छन् । केहीमा छैनन् । त्यस्तै राजदूतमध्ये म अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत हुँ । मेरो नाम डा. शंकरप्रसाद शर्मा हो ।
सन् २००९ नोभेम्बरदेखि अमेरिकामा राजदूत छु । म राष्ट्रिय योजना आयोगको पहिले सदस्य र पछि उपाध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार भएँ । मैले दक्षिण पूर्व एसिया अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री भएर काम गरें । मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र पढाएँ । मैले विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, युएनडिपी जस्ता संस्थामा सल्लाहकार भएर काम गरें । विश्वका धेरै पत्रपत्रिकामा लेख लेखेको छु । मैले लेखेका र सम्पादन गरेका आठ वटा किताब छन् । अनि सम्पादन गरेका पत्रिका पनि छन् ।
यतिका कुरा भनेपछि तिमीलाई सोध्न मन लाग्यो होला, ‘तपाईं कहाँ जन्मनुभएको हो ?’
हो, भन्छु है । मेरो जन्म २०१० असारमा काठमाडौंको गैरीधारामा भएको हो । मेरो बुबाको नाम भीमप्रसाद उपाध्याय घिमिरे र आमाको नाम रमादेवी उपाध्याय घिमिरे हो । मेरा दाजु, दिदी र बहिनी हुनुहुन्छ । मैले त्रि-चन्द्र कलेजमा बीएसम्म पढें । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमए गरें । अनि मैले अमेरिकाको हवाई राज्यको हवाई विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी, पीएचडी गरें ।
बुबा जागिरे भएकाले मैले धेरै स्कूल पढेको छु । हामी ओखलढुंगाका घिमिरे हौं । बुबा जागिरे भएकाले परिवार काठमाडौं आएको हो । बुबा-आमा काठमाडौं आएपछि म जन्मिएको हुँ । बुबाको जागिर लेखापढी गर्ने थियो । त्यो कार्यालय अहिलेको गृह मन्त्रालय हो ।
मलाई सानोमा बुबा-आमाले घरमा पढाउनुभयो । आमाले क ख … सिकाउनुभयो । अक्षर चिनाउनुभयो । बुबाले त्योभन्दा माथिको पढाउनुभयो । त्यसो भएकाले बुबा-आमालाई मेरो पहिलो गुरू मान्नुपर्छ । त्यसपछि टोल-छिमेकमा पढियो । कक्षा ४ को भएपछि लैनचौरको शान्ति विद्यागृहमा भर्ना भएँ । घरबाट नजिक भएकाले त्यहाँ पढिएको हो । शान्ति विद्यागृहमा जनकनाथ प्याकुरेल र योगनाथ प्याकुरेलले पढाउनुहुन्थ्यो ।
कक्षा ६ मा म पद्मोदय स्कुलमा भर्ना भएँ । पद्मोदयको पढाइ राम्रो भनेर त्यहाँ पढ्न गएको हो । घरबाट अलि टाढा हो । २५ मिनेट लाग्थ्यो । पद्मोदयमा इश्वरराज अर्याल सर हुनुहुन्थ्यो । उहाँ इतिहास पढाउनुहुन्थ्यो । मलाई त उहाँले पढाउनु भएको होइन । मलाई कृष्णबहादुर मानन्धर, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, भरतराज शर्माले पढाउनुभयो ।
स्कुल जाँदा-आउँदा हामी रमाइलो गर्थ्यौं । त्यसबेला हिंडेर जानुपर्थ्यो । बाटोमा अम्बा, हलुवावेद, आरूबखडा ढुंगाले हिर्काएर झारेर खाँदै हिंड्थ्यौं । साथीभाईको लहडमा लागेर चुरोट पनि खाइयो । तर घरका डरले त्यो बानी बसेन ।
साथीभाईसँग मिलेर पशुपतिको सूर्यघाटमा नुहाउन गइन्थ्यो । पौडी खेल्दा कट्टु पनि लाउनु नपर्ने कस्तो बेला थियो ! भोगटेको फुटबल बनाएर खेलिन्थ्यो । ठूलो भएपछि त छालाकै फुटबल पाइयो । चंगा खुब उडाइयो । कहिलेकाही घुम्न जाने गरेको थियो । साथीभाइसँग सानो गौचरणमा फुटबल खेलिन्थ्यो । त्यसबेला फुटबल खेल्न प्रशस्त ठाउँ थिए ।
स्कुल जाँदा दिएको दश पैसाले के के किनेर खाने गरेको थियो । केटाकेटीलाई थोरै पैसा मात्र दिने गरेको थियो । हामी बरफ, काक्रो, पिपरमेन्ट चकलेट किनेर खान्थ्यौं ।
सानोमा घरमा जे पाक्थ्यो, म त्यहिं खान्थे । चिया खान पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो । त्यतिबेला सानालाई चिया दिने चलन थिएन । मासु खान पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । किनभने घरमा १५/२० दिनमा मात्र मासु खाने चलन थियो ।
मैले कक्षा ८ पास गरेपछि बुबाको गोरखा सरूवा भयो । हामी गोरखा गयौं । म कक्षा ९ मा गोरखा बजारको शक्ति विद्यालय हाइस्कुलमा भर्ना भएँ । त्यहाँ बाबुराम श्रेष्ठ सरले पढाउनुहुन्थ्यो । उहाँ राम्रो पढाउनुहुन्थ्यो । अरू धेरै सरहरू थोरै मात्र पढेका हुनुहुन्थ्यो । पास हुने गरी पढाउने सर नै कम हुनुहुन्थ्यो । टिचिङ प्राक्टिस गर्न आएका सरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । गणित र विज्ञान पढाउने सरको सधैं अभाव हुन्थ्यो । काठमाडौंको अस्कल क्याम्पस बिदा भएका बेला गएका त्यहाँका विद्यार्थीले पढाउनुहुन्थ्यो । बेलामा सरहरू नपाउने भएकाले सबैको पढाई कमजोर थियो ।
गोरखामा रहँदाको एउटा रमाइलो घटना छ । मेरा दुई साथीसँग मिलेर एकपटक म डाँडो चढ्न गएँ । हामी डाँडाको टुप्पोमा त पुग्यौं । तर त्यहाँ पुग्दा पानी पर्यो् । निकै अबेर भएछ । अन्धकार भयो । घर फर्कदा निकै गाह्रो भएको थियो । घरमा कसैलाई थाहा भएन । थाहा पाएको भए त पिटाइ खाइन्थ्यो होला । त्यसबेलाको एउटा साथीको नाम अचल थियो । अर्को साथीको नाम मैले बिर्से ।
कक्षा १० पनि मैले त्यहिं स्कुलमा पढे । २०२३ सालमा एसएलसी दिएँ । सेकेन्ड डिभिजनमा पास गरें । मेरो मनपर्ने विषय गणित थियो । एसएलसीमा ऐच्छिक गणितमा ९० भन्दा बढी र अनिवार्यमा गणितमा ८० भन्दा बढी आयो ।
हाम्रो मामाघर ओखलढुंगाकै गाम्नाङ हो । मामाहरू अधिकारी हो । तर म अहिलेसम्म ओखलढुंगाको मामाघर गएकै छैन । मामाहरू पछि कताकता सर्नुभयो ।
यसरी तीनवटा स्कुलमा पढ्दै रमाइलो गर्दागर्दै यसरी मेरो बाल्यकाल बित्यो ।
अनि अन्तिममा के भन्छु भने, ‘मान्छे असल हुनुपर्छ । मेहनती हुनुपर्छ । राम्रो पढ्नुपर्छ ।’
(शब्दः राजेश कोइराला/अमेरिका, २०७० असार २२/सन् २०१३ जुलाई ६ को ‘नागरिक दैनिक‘को बालकोसेली ‘जुनकिरी’मा प्रकाशित)